Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Fanairana an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana: ho faty mahafaty kokoa ny COVID
Enga anie 15, 2021
Fanairana an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana
Ny talen'ny jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus dia nanambara fampitandremana manjavozavo androany momba ny coronavirus COVID satria izy sy ireo miovaova dia manakaiky ny taona faharoa.
Na eo aza ny fanaovana vaksiny manerana an'izao tontolo izao, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia maminavina ny taona 2 an'ny COVID ho ratsy noho ny taona voalohany.
Ny WHO dia mandeha hatreto milaza fa amin'ity taona ity dia mbola hahafaty bebe kokoa.
Na dia misy torolàlana vaovao avy amin'ny CDC milaza aza fa tsy ilaina ny saron-tava hanaovana vaksiny feno, maro no milaza fa mialoha ny fotoana hanaovana izany fanambarana izany.
Hoy ny Tale jeneralin'ny OMS: “Eo amin'ny làlana manaraka ho an'ny taona faharoa amin'ity areti-mandringana ity isika no mahafaty olona lavitra noho ny voalohany.”
Tany Japon, nisy fanjakana vonjy taitra voan'ny virus coronaavirus tany amin'ny faritra 3 hafa 10 herinandro monja talohan'ny Lalao Olaimpika. Tokyo sy ny faritra hafa dia efa eo ambany baiko maika mandra-pahatapitry ny volana Mey, miaraka amin'i Hiroshima, Okayama, ary ny avaratr'i Hokkaido, izay hampiantrano ny hazakazaka Olaimpika, izay manatevin-daharana azy ireo ankehitriny.
Japon dia miady amin'ny onjan'ny virus coronavirus fahefatra izay manisy fihenan'ny rafitra fitsaboana. Nisy fanangonan-tsonia natolotra miaraka amin'ny sonia maherin'ny 350,000 mitaky ny hanafoanana ny Lalao.
Any Taiwan, ireo toerana fialamboly toy ny bar, clubclub, ny trano fialan-tsasatra karaoke, ny cafe Internet, ny saona, ny trano fisotroana dite, ny klioba mpampiantrano ary ny klioban'ny dihy ary koa ny ivon-toerana fanaovana fanatanjahantena ary ny tranomboky any Taipei dia nikatona taorian'ny nipoahan'ny onjan'ny COVID Nanomboka teo amin'ny andiana piloto izany.